छो;रा बु;हारीले घर;बाट निका;लेपछि एक्लै बाटो;मा यि बु;ढी आ:मा भ;न्छिन्. | No.1 Nepali News
Home समाचार छो;रा बु;हारीले घर;बाट निका;लेपछि एक्लै बाटो;मा यि बु;ढी आ:मा भ;न्छिन्.
५ फाल्गुन २०७८, बिहीबार २३:४६
जुम्ला सदरमुकाम खलङ्गा नजिकैको एक बौद्ध गुम्बा पछाडि सानो काठको टहरामा ८३ वर्षीया वृद्धा गाँस बासको खोजीको सहारामा भौतारिएको अवस्थामा भेटिनुभयो ।
पत्रकारको टोली त्यहाँ पुग्दा सोही गुम्बामा बस्ने पुजारीले उहाँको अवस्था जानकारी गर्न थाल्नुभयो । पुजारीले साहाराविहीन व्यक्ति खान, बस्न पनि समस्या भएको बताउनुभयो ।
महिला बोल्न हिचकिचाइरहनुभएको थियो । केही छिनमा उहाँलाई बाहिर बोलाएर गुम्बा अगाडि उहाँको परिचय र अवस्थाका बारेमा जानकारी लिन खोज्दा ८३ वर्षीया ज्येष्ठ नागरिक महिलाले अहिलेसम्म नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नुभएको छैन ।
मुगुको डोल्पु स्थायी ठोगाना बताउने महिला वर्षौंदेखि बास र गाँसको खोजीमा भौतारी रहनुभएको छ । जुम्ला सदरमुकाममा चार वर्षदेखि माग्दै हिँड्ने गर्नुभएकी र अन्तिममा बस्ने व्यवस्था कतै नभएपछि उहाँ गुम्बाको आश्रयमा गएर ओत लिइरहनुभएको छ ।
नाम साङ्गे फटिङ बताउने ती महिलाले २० वर्षदेखि जुम्लाको चौधबिस क्षेत्रमा बसेर साहाराविहीन भएपछि जीवन जिउन सदरमुकाम आएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “चौधबिसको खालाढिकमा विवाह गरेको तर श्रीमान् र छोरा दुवैको मृत्यु हुँदा आफू एक्लिएपछि साहाराविहीन भएकी छु, श्रीमान् र जवान छोरा रोगले मरेपछि र आफ्नो कोही नभएपछि अहिले गुम्बाको आडमा बसिरहेकी छु ।”
उहाँको साहारामा अहिले उर्गेन र्तीनजङ गुम्बाका ७८ वर्षीय गुरु कांसर लामा र ५९ वर्षीय टोमा लामा हुनुहुन्छ । उहाँहरुले पछिल्लो समय बास र गाँस दिइरहेको बताउनुभयो । अहिलेसम्म ती वृद्धाको नागरिकतासमेत छैन । कसरी बनाउने भन्नेमा आफूलाई पनि थाहा नभएको गुरु कांसरले बताउनुभयो ।
Previous articleसीता परियार बनिन् दलित समुदायबाट सीडीओ बन्ने पहिलो महिला
Next articleडाइटिङ गर्ने बानी छ ? सावधान ! शरीरमा पर्नसक्छ यस्तो साइड इफेक्ट
हाम्रो पुस्ता - ५ फाल्गुन २०७८, बिहीबार २३:४६ 0